Jiko Casri ah adiga ayaa kuu dhuuqeysa
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Jiko Casri ah adiga ayaa kuu dhuuqeysa
2020 / 10 / 27 QoondayntaTilmaamaha qasabada 1055 0
Haddii aad go'aansatay inaad rabto inaad dayactirto jikadaada markaa, mid ka mid ah waxa ugu horreeya ee aad rabto inaad ka fikirto inaad sameyso waxay noqon doontaa inaad ku darto wax yar oo taabasho casri ah. Waa run in dad badani runti ka doorbidaan jikada wax badan ka guridda maxaa yeelay waa wax aad u qurux badan laakiin, ku darista aalado casri ah hareeraha fikrad xun ma ahan.
Noocee Ah Qolka jikada Ma waxaad leedahay?
Tusaale ahaan, ma ogtahay inaad heli kartid qasabad jikada wadata oo hubaal u muuqata mid ka qurux badan tuubada jikada ee caadiga ah isla markaana isla markaasna noqon doonta hab wax ku ool ah? Haddii aad internetka gasho oo aad raadiso matoor madow oo soo jiidaya qasabadda jikada, si fudud maxaa yeelay waligaa kuma khaldami kartid wax yar oo madow ah, waxaan dammaanad ka qaadi karnaa inaad ka hor heli doontaan fursado badan oo kala duwan oo gurigaaga ka dhigi doona mid qurux badan jikadaada dhexdeeda muuqaal yaab leh.
Qasabadda madbakha madow ayaa asal ahaan u dhigma wax badan. Haddii aad rabto qaab casri ah waxaad isticmaali kartaa qasabadda madow ee madbakha. Isla mar ahaantaana, haddii aad raadineyso inaad waxoogaa dhaqameed aaddo oo aad u tagto qaab guridda ah waxaan hubaal ahaan u ballan qaadi karnaa inay buluugga qasabadda jikada ay dhab ahaan u noqoneyso ciyaar wax kasta oo ay tahay inaad maskaxda ku hayso. Waa midab dhexdhexaad ah waana hubaal inuu kusocdo jikadaada.
Xulo Jikada aad rabto
Xusuusnow taas, waxaa lagaa rabaa inaad haysato nooca jikada ee kaa dhigi doonta inaad dareento raaxo inta aad wax ku karinaysid. Haddii aad dooratid jiko casri ah oo aad ka tahay qof guridda ah kama raaxaysan doontid naftaada wax badan. Wax la mid ah ayaa loo doortaa jikada guridda kaliya maxaa yeelay waa mid moodada laakiin runti ma doonaysid mid.
Saxanka jikada ayaa laga yaabaa inuu umuuqdo waxoogaa bilow ah laakiin waxaan hubaal ahaan u balan qaadi karnaa inuu ka mid yahay qeybta ugu muhiimsan jikada. Ma ogaan kartid laakiin waa waxa soo jiita dareenka ugu badan xitaa si miyir la'aan ah. Haddii saxanka jikadaada uusan aheyn mid casri ah, weyn, saxan raaxo leh markaa jikada oo dhan waxay u muuqaneysaa mid xun oo xaqiiqdii ma doonaysid wax sidaas oo kale ah. Hel saxan casri ah adigoo si fudud ugu daray qasabad cusub.
Hore:: Halkeen Ka Heli Karaa Tuubada Jikada Ugu Fiican? Next: Waa Maxay Nooca Qashin-qubka Jinkayga Ayaan U Rabaa Jikadeyda?